Amapayipi ama-hanger factory, abahlinzeki - China amapayipi ama-hanger manufacturers
UPC Plastic Tube yisivikelo
Njengenye yeziphanyeko zokuncintisana kakhulu zenkampani, ama-insulators ethu epulasitiki epulasitiki avunyelwe yi-UPC. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, izimbambo zazo zivumela ipayipi ukuba lishelele kalula futhi lithule lapho ipayipi likhula futhi lisebenza.
Ukuvala Pipe Ngocingo NgeRubber
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zokuvala ipayipi esheshayo zifakelwe ukwahlukanisa irabha kwe-EPDM yokwehlisa umsindo okuhambisana ne-DIN 4109. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eYurophu, Middle East nase-Asia. Futhi, kulula ukuvala ngesandla esisodwa kuphela.
ISaddle Support nge-U-bolt
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, ukusekelwa kwethu kwesihlalo sehhashi nge-U-bolt ukuxhaswa okuthayiphiwe lapho kungadingeki ukulungiswa mpo. Futhi ithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Ngaphandle kwalokho, i-U-bolt ingahlinzeka ngokuqina okwengeziwe.
Isiphanyeko esenziwe ngethusi le-Bell Hanger sokumisa amapayipi angafakwanga amile
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, iziphanyeko zethu zensimbi ezifakwe ithusi zenzelwe ukumisa amapayipi amile angafakiwe. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, zifakwe izikulufo ezimbili zokuqinisa kanye nezikulufo eyodwa zokufaka ngokuhlelekile.
Heavy Duty U-Ibhande nge Rubber Lining
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, u-straps wethu osindayo wezintambo zenjoloba aklanyelwe futhi anconyelwa ukufakwa kwamapayipi afakwe umbandela noma angafakiwe, futhi angasetshenziswa ngokufakwa kwezinsimbi zenjoloba. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
UPC Plastic Isigamu Ngocingo
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zepulasitiki ezihhafu zivunyiwe yi-UPC. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, ukufakwa kuyashesha futhi kulula.
Ukuvala Pipe Ngocingo Okusheshayo
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zokuvala ipayipi ezisheshayo zikhululwa ngokushesha okokuqina kwepayipi nge-screw eyodwa. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eYurophu, Middle East nase-Asia. Futhi, kulula ukuvala ngesandla esisodwa kuphela.
Ukusekelwa Kwamapayipi Okuguqukayo
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, ukusekelwa kwethu kwepayipi okuguquguqukayo yipayipi le-NPT elibethelwe ukufaka isihlalo sepayipi nge-NPT pipe lock nut evumela ukulungiswa okuqondile ku-stanchion yepayipi. Futhi ithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.